မြန်မာ့ရိုးရာ သူငယ်တော်ဝတ်စုံ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့ကို ကမ္ဘာ့အလယ် မှာ ဖော်ပြ တော့မယ့် MISS UNIVERSE MYANMAR သူဇာဝင့်လွင် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မြန်မာ့ရိုးရာ သူငယ်တော်ဝတ်စုံ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့ကို ကမ္ဘာ့အလယ် မှာ ဖော်ပြ တော့မယ့် MISS UNIVERSE MYANMAR သူဇာဝင့်လွင်
မြန်မာ့ရိုးရာ သူငယ်တော်ဝတ်စုံ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့ကို ကမ္ဘာ့အလယ် မှာ ဖော်ပြ တော့မယ့် MISS UNIVERSE MYANMAR သူဇာဝင့်လွင်
ဘယ်တော့မှလဲကျမသွားဘဲ ပစ်လိုက်တိုင်းထောင် နေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာကစားစရာအရုပ်လေး ပစ်တိုင်းထောင်ရဲ့အနှစ်သာရကို ဒီနှစ်ရဲ့ Miss Universe စင်မြင့်ထက်မှာ မြန်မာကိုယ်စားပြု အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်က ဖော်ပြတော့မှာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဒီအရုပ်လေးကို မြန်မာတင်မက ကမ္ဘာကပါအသိအမှတ်ပြုပြီး စိတ်ဝင်စားမှုခံရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။
ဒီဝတ်စုံလေးကို National Costume အဖြစ်နဲ့ ပွဲထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ Candy လက်ထဲမရောက် လာသေးပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုလည်း ” ၅.၅. ၂၁ – DHL Agent မှ ရန်ကုန်တွင်ပစ္စည်းလာယူ ၆.၅. ၂၁ – ရန်ကုန်မှ မြဝတီသို့ပို့ဆောင် ၇.၅. ၂၁ – မြဝတီမှ မဲဆောက်သို့ပို့ဆောင် ၈.၅. ၂၁ – မဲဆောက်မှ DHL ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့စတင်ပို့ဆောင် ၉.၅. ၂၁ – ဘန်ကောက် – ဟောင်ကောင် – ဂျာမဏီ မှတစ်ဆင့် နယူးယောက်သို့ရောက်ရှိ ၁၀.၅. ၂၁ – နယူးယောက်တွင် ကြားဖြတ်ထုတ်ယူပြီး လူကိုယ်တိုင် ဖလော်ရီဒါသို့ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မူလလိပ်စာပေးထားသည်မှာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ဖလော်ရီဒါလိပ်စာဖြစ်သဖြင့် ကြားဖြတ် ထုတ်ယူ၍မရကြောင်းသိရှိရ၊
ယနေ့ည ၉ နာရီ လေယာဉ်ဖြင့်တင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ပို့တာကိုမစောင့်ဘဲ ဖလော်ရီဒါရုံးတွင် ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ထုတ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်းညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက် ၁၁.၅. ၂၀ – ဖလော်ရီဒါတွင် သွားရောက်ထုတ်ယူရာ၌ မရောက်သေးကြောင်းသိရ၊ နယူးယောက်ရုံးသို့ထပ်မံစုံစမ်းရာ ပစ္စည်းရောက်မလာသေးကြောင်းသိရ၍ လေဆိပ်သို့လိုက်သွားပြီး အကျိုးအကြောင်း အားရှင်းပြ၍ စုံစမ်းညှိနှိုင်းရာ လေဆိပ်ကွန်တိန်နာထဲသို့ရောက်နေကြောင်း ယခုညလေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသဖြင့် ဖလော်ရီဒါတွင်သွားရောက်ထုတ်ယူရန် အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိ ၁၂. ၅. ၂၀ – လေယာဉ်နှင့် ပါ မပါ စုံစမ်းရာတွင် နယူးယောက်မှာပင်ရှိနေသေးကြောင်းသိရသည့်အတွက် အချိန်မီမရောက်ရှိပါက အစားထိုးဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဝတ်စုံရရှိရေးနှင့် လူကြုံထည့်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ” ဆိုပြီး Miss Universe Myanmar Organization က ဖြေရှင်းထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေကို Miss Universe Myanmar သူဇာဝင့်လွင် ကလည်း ” ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ဟာ စက္ကူကို အခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားပါတယ် လုံးဝန်းတဲ့သဏ္ဍာန် ကိုယ်ထည် အခြေပိုင်းကို ပိုမိုကြီးမားစေပြီး မျက်နှာပြင်ကို ဖို မ ခွဲ ခြားပြီး ရေးဆွဲလေ့ရှိကြပါတယ် ပြိုင်ပွဲဝင် ဝတ်ဆင်ထားသောဝတ်စုံမှာ သူငယ်တော်အက ကရာတွင် ဝတ်ဆင်သော ဝတ်စုံပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေလက်ကောက်၊ ရွှေခြေကျင်း၊ ရွှေဒင်္ဂါး ဆွဲကြိုးနှင့်ကရဝိတ် ခြေနင်းတော်တို့ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ဆံပင်ကို ဆံရစ်ဝိုင်း ဆံနှစ်ခွ ဂျိုစောင်းတွင် စည်းထားပါသည်၊၊ ပစ်တိုင်းထောင်အရုပ်လေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ လဲကျသွားတိုင်း ပြန်လည်ထောင် မတ်နိုင်သလို ဘယ်လိုအခြေ အနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်း ပြန်လည်ရုန်းထ နိုင်တဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကို ဖော်ဆောင်ရည်ညွှန်းချင်သောကြောင့် ယခုနှစ် Miss Universe Myanmar ရဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ပြတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ရှင် ” ဆိုပြီး ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သူငယ်တော်ဝတ်စုံနဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအရုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပစ်တိုင်းထောင် လေးတို့ရဲ့ ပူးတွဲတင်ဆက်မှုကို Miss Universe စင်မြင့်ထက်မှာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးက မြင်တွေ့ချင်ကြပါတယ်။ ဝတ်စုံအချိန်မီရောက်သွားပြီး မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြနိုင်ဖို့လည်း အားလုံးက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ Candy ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီးယုံကြည်ရနိုင်တာမို့ ဝတ်စုံလေးအချိန်မီရောက်သွားပြီး ပွဲမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အကောင်းမွန်ဆုံးချပြနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Photo Credit – Thu Zar Wint Lwin’s FB Acc
Previous post ဘန်ကောက် ထိ သွားပြီး အရေးပေါ် နှလုံးခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ် လိုက် ရတဲ့ ဂျွန်လွင်…..
Next post ဘစ်ကနီ နဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်း လွန်း အောင် ရိုက် ထားတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို